Galaxy Note3SM-N900-Version 4.4.2 ကို Root လုပ်နည်း ~ သား​ကောင်းရတနာ(နည်းပညာ)
Galaxy Note3SM-N900-Version 4.4.2 ကို Root လုပ်နည်း
4/19/2014 Root လုပ်နည်းများ No comments
တောင်းဆိုထားတဲ့ သူများအတွက် Galaxy Note3SM-N900-Version 4.4.2 ကို Root လုပ်နည်းလေးကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ် ပထမဆုံးလိုအပ်တာလေးတွေ အောက်မှာဒေါင်းယူလိုက်ပါ
SamSung Driver= DOWNLOAD NOW
အားလုံးဒေါင်းပြီးပြီဆိုရင်တော့ Winrar နဲ့ချုပ်ထားတဲ့ ဖိုင်များကိုဖြည်ချလိုက် ပြီးရင်တော့ ထုံးစံအတိုင်း မိမိရဲ့ဖုန်းရဲ့ Settings ထဲဝင်ပြီး Unknown Sources / USB debugging ကိုအမှန်ခြစ်ပေးထားပါ Driver မရှိသေးသူများကတော့ Samsung USB Driver ကို Install လုပ်ပါ ပြီးရင်တော့ Odin3-v3.07 ကို Run ပြီတော့ PDA ဆိုတဲ့ button လေးကိုကလစ်ပြီးတော့ ဒေါင်းပြီးဖြည့်ထားတဲ့ CF-Auto-Root-ha3g-ha3gxx-smn900.tar.md5 ဆိုတဲ့ ဖိုင်ကိုရွေးပေးလိုက်ပါ အောက်ကပုံလေးအတိုင်း ပုံများသေးနေရင် ကလစ်ပြီးကြည့်ပါ
ပြီးရင်တော့ ဖုန်းကို Power ပိတ်ပါ၊ Download Mode ၀င်ဖို့ (Volume Down + Home + Power) တပြိုင်တည်းတွဲနိပ်ထားပါမယ် Warning!! တက်လာရင်တော့ Volume Up ကိုဆက်နိပ်ပါ ဒါဆို Download Mode ရောက်ပီ အောက်ကပုံအတိုင်း
ပြီးရင်တော့ ဖုန်းကို ကွန်ပျူတာနဲ့ ချိတ်ဆက်ပါမယ် Odin ကလဲ ဖုန်း-driver ကိုသိပြီဆိုရင် ID:COM မှာအပြာနုရောင်လေးသန်းလာပါမယ် အောက်ပုံလေးအတိုင်း
အ ဆိုရင်တော့ Star button လေးကိုနိပ်ပြီး ခဏစောင့်နေပါ သူပါသူအလုပ်လုပ်နေပါလိမ့်မယ် အပေါ်က အစိမ်းကွက်လေးထဲမှာ PASS! ဆိုပြီးပြရင်တော့ ဖုန်းကို Root လုပ်ခြင်းပြီးပါပြီ ဖုန်း restart ကျပြီးပြန်တက်လာရင် SuperSu လေးဖုန်းထဲရောက်နေပါပြီ။
စစ်ဆေးကြည့်ချင်သေးရင် Root Checker App လေးကို(ဒီနေရာက)ဒေါင်းယူပြီး စစ်ဆေးကြည့်လိုက်ပါ